सुखी जीवनका लागि मननयोग्य तीन कुरा : चाणक्य नीति - Nawalpur Dainik
चाणक्य महान चिन्तक एवं दार्शनिक हुन् । उनी राजनीतिक र कूटनीतिका ज्ञाता थिए । उनैले नन्द वंशका नाश गरेर चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राजा बनाए । उनी सम्राट चन्द्रगुप्ताका सल्लाहकार थिए । उनलाई राजधर्मका प्रणेता, आर्थिक दर्शनका प्रतिपादक र सामाजिक दर्शनकार पनि मान्ने गरिन्छ । उनले ‘चाणक्य नीति’ नामक पुस्तक लेखेका छन् । यस पुस्तकमा जीवन र जगतका बारेमा थुप्रै कुरा लेखिएका छन्, जो हामीलागि अनुकरणिय हुनसक्छ । साथै यसले हामीलाई सार्थक मार्ग पहिल्याउन मद्दत गर्छ ।
अर्कालाई झुक्याएर, छलेर, लुटेर कमाएको धनले तपाईंलाई कहिले पनि सुख र सन्तुष्ट दिदैन । बरु, त्यसले सधै शंका, भय, त्रास, मोहको दलदलमा फसाइदिन्छ । त्यसैले धन आफ्नो पसिना, बुद्धि–विवेकबाट आर्जन गरेको हुनुपर्छ । यसरी कमाएको धनले मात्र तपाईंको मनलाई शितल तुल्याउँछ । अन्य ढंगले आर्जन गरेको धनले तपाईंको मनलाई पोल्छ ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सत्रु को होला ? कसले हामीलाई प्रगति गर्नमा बाधा पु¥याएको होला ? कसले हाम्रो अनमोल समय वर्वाद गरिरहेको होला ? छिमेकी, आफन्त, साथीभाई, सहकर्मी कोही पनि यसका दोषी होइनन्÷हुँदैनन् । दोषी हामी आफैभित्र छ । त्यो हो, अल्छीपन । जब हामी केही गर्न खोज्छौं, हामी भित्रको अल्छीपनले रोक्छ ।
जब हामी कुनै काम गर्न चाहन्छौं, हामी भित्रको अल्छीपनले छेक्छ । जब हामी मनमनै बुनिएको योजना कार्यन्वयन गर्ने सोंच बनाउँछौं, हामी भित्रको अल्छीपनले बाधा पु¥याउँछ । अर्थात आलस्य एवं अल्छीपन नै हाम्रो प्रगतिको वाधक हो ।
सफल व्यक्तिहरुको कथा पढौं, उनीहरुको दैनिक तालिका हेरौं, कतिपनि अल्छी गरेका पाइदैन । उनीहरुमा जाँगर हुन्छ । जाँगरसँगै उर्जा हुन्छ । उर्जासँगै रचनात्मक क्षमता हुन्छ । त्यही कुराले उनीहरुलाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाउँछ । संसारमा जति गरिब छन्, त्यसमा धेरैजसो कारण उनीहरु आफै हुन् ।
हामी गरिब हुन्छौं, कमजोर हुन्छौं भने त्यसमा अरु भन्दा बढी हामी आफै जिम्मेवार छौं । किनभने फुटपाथबाट उठेर पनि कतिपयले विश्वलाई हाँक दिएका छन् । अर्थात पुटपाथमा जन्मनु नै समस्या होइन । एउटा प्रचलित भनाई छ नि, ‘तिमी गरिबको कोखमा जन्मियौं, त्यो तिम्रो गल्ती होइन । गल्ती त त्यो हो, तिमी गरिब भएरै म¥यौं ।’
हामी भोलिको कुराबाट मात्र चिन्ताग्रस्त छैनौं । हिजोका कुराले पनि हामी पिरोलिएका छौं । हिजोको दिनमा भएका गल्ती, कमजोरीले हाम्रो मन पोलिरहन्छ । हिजो त्यसो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने औडाहले दुखी बनाइरहेको छ । हिजोको चिन्ता र भोलीको भय त्यागेर आजको दिनलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । आजको अर्थात वर्तमानलाई हामी जति रचानत्मक, जति उत्कृष्ट बनाउँछौं, भोलि र हिजोको डर एवं चिन्ता त्यसै हराउनेछ ।
चाणक्यको अनमोल वचन
-मानिस एक्लै जन्मन्छ, एक्लै मर्छ । साथै उसले आफ्नो राम्रो र नराम्रो दुबै कामको फल पनि आफैले भोग्छ । उनी एक्लै स्वर्ग वा नर्क जान्छ । -तपाईं के गर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ यो कुरालाई व्यक्त नगर्नुहोस् । बुछिमानीपूर्वक यसलाई रहस्यमै राख्नुहोस् र कामको लागि दृढ रहनुहोस् ।
-शिक्षा सबैभन्दा राम्रो मित्र हो । एक शिक्षित व्यक्ति हरेक स्थानमा सम्मानित हुन्छन् । शिक्षाले सौन्दर्य र यौनलाई परास्त गर्न सक्छ । -जब भय तिम्रो सामुन्नेमा आइपुग्छ, त्यसलाई आक्रमण गरेर नष्ट गरिदिनुहोस् । -सर्प, सिंह, होहल्ला गर्ने भिड, सानो बालक, अर्काको कुकुर र मुर्ख । यिनीहरुलाई निद्राबाट जगाउनु हुँदैन । -सबैभन्दा ठूलो गुरुमन्त्र हो, कहिले पनि आफ्नो राज अर्कालाई बताउनु हुँदैन । यदि त्यसो गर्नु भएन भने तपाईं बर्बाद हुनसक्नुहुन्छ ।
– सन्तुलित मस्तिष्क जस्तो कुनै सादगी हुँदैन, सन्तोष जस्तो कुनै सुख हुँदैन, लोभ जस्तो कुनै विराम हुँदैन र दया जस्तो कुनै पूण्य हुँदैन । -त्यो ज्ञान, जो किताबमा सीमित छ । त्यो धन, जो अर्काको कब्जामा छ । यी दुबै आफ्नो आवश्यक्ता परेको बेला काम लाग्दैन । – सारसले जस्तै एक बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्नुपछृ । आफ्नो उदेश्यलाई स्थानको जानकारी, समय र योग्यता अनुसार प्राप्त गर्नुपर्छ ।
Posted in पत्रपत्रिकाबाट, समाज, साहित्य, हेडलाइन
Prevभदौ २५ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल